जाँदाजाँदै देउवाले ठूलै अपराध गरे | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / जाँदाजाँदै देउवाले ठूलै अपराध गरे
जाँदाजाँदै देउवाले ठूलै अपराध गरे
Posted by: युगबोध in विचार February 19, 2018	0 132 Views
हाम्रो दे शका शासकहरुले विकासका कामहरु गर्न नसके पनि विनाशमुखी काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनचाहना समे त पूरा गर्न सकिरहे का छै नन् । यो क्रममा जनताले निर्वाचनमार्फत फालिदिएको दे उवा सरकार चुनावपछि पनि विभिन्न बहानामा सत्तामा चिप्किरहे  । प्रजातन्त्रको नाममा कलङ्कित बन्न पुगे  । सत्ता छो ड्नु उनीहरुको लागि प्राणै छो डे सरह हु“दो रहे छ भन्ने कुरा दे उवाले दे खाइछाडे  । जनताबाट फालिएको दे उवा सरकारले पछिल्लो समयमा मनपरी निर्णय गर्न पुग्यो  । जुन निर्णयलाई कांग्रे सकै बुद्धिजीवीहरुले खिल्ली उडाए । कुनै पनि आधारबिना गरिने निर्णय जतिसुकै लो कप्रिय भएपनि अन्ततः हा“सो को पात्र मात्र हुन पुग्दो रहे छ । जस् तै ६५ वर्ष पुगे कालाई बृद्धभत्ता दिने निर्णय । ने पाली जनताको आयु लम्बिदै छ । तर सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमे र घटाउ“दै छ । यो भन्दा बे रो जगारी भत्ता भने को भए सुहाउने थियो  । हुन त आर्थिक आधार र बजे टबिना गरिने घो षणा के वल घो षणा मात्र बन्छ । यस् तो घो षणाले जनताबाट वाहवाही पाउनुको साटो झन घृणा पो पाउ“दो रहे छ भन्ने कुरा दे उवाले गरे को निर्णय र जनताले उनको निर्णयप्रति गरे को टिप्पणीबाट पुष्टि हुन्छ । वामपन्थी पार्टीमा ठूलै बिग्रह नआउने हो भने दे उवाको राजनीतिक जीवन अब सकियो  । किनभने उनी अहिले ७२ वर्षका भइसके ।
पाच वर्षपछि ७७ वर्ष अर्थात हिन्दू मतअनुसार अरु केही वर्षपछि ८४ पूजा गर्नुपनेर् अर्थात मृत्युको मुखमा पुगे भन्ने सन्दे श दिनु हो  । मान्छे बूढो भएपछि बालक जस् तो व्यवहार गदैर् अन्ततः अर्धचे त हुनपुग्छ भन्ने भनाइ छ । दे उवाको पछिल्लो पटकका निर्णयहरुमा बालकपन दे खाए । कतिपय निर्णय त अर्धचे तनामा गरे को जस् तो दे खियो  ।
दे उवाले फागुन ३ गते राजीनामा दिए भने उनले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले नै के पी प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसके का थिए । माघको अन्तिममा दे उवाले घो र आपत्तिजनक, जै विक विविधता र पर्यावरणबिरो धी निर्णय गर्न पुगे  । यति मात्रै हो इन संविधानको समे त खिल्ली उडाउन पुगे  । धर्म निरपे क्ष राष्ट्रमा एउटा धार्मिक संस् थालाई निकुञ्जको महत्वपूर्ण वन दिने निर्णय गरे  । भो लि मुस् िलम र क्रिश्चियनहरुले शव गाड्न वा धार्मिक गतिविधि गर्न वन क्षे त्र मागे के गनेर् ? भो लि अरुले पनि वनमा गएर तपस् या गर्दछन् । अनि वन क्षे त्र दे ऊ भने के गनेर् ? यस् तो संविधानबिरो धी निर्णय त्यसै गरे नन् हो ला । अवश्य पनि आर्थिक चलखे ल भएको हुनुपर्दछ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सात सय हे क्टर हल खो रिया वन क्षे त्र तपस् िव भनिने रामबहादुर वमजन आवद्ध धार्मिक संस् थालाई दिने निर्णय गरे  । वनमन्त्री विक्रम पाण्डे को ठाडो निदेर् शनमा क्याविने टबाट दे उवाले निर्णय गराएका हुन् । के ही समय पहिले अदालतको आदे शमा बारा जिल्ला वन कार्यालयले प्रहरीको सहयो ग लिएर त्यस क्षे त्रमा बनाइएका पक्की संरचना डो जर लगाएर भत्काएको थियो  । अचम्मको कुरा त राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन मन्त्रालयका कर्मचारी कसै लाई थाहा नदिएर निर्णय गर्नुले ठूलै आर्थिक चलखे ल भएको हुनुपर्दछ । यस् तो पर्यावरणीय अपराध गनेर् प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइनुपर्दछ । सरकार भन्दै मा कुनै पनि प्रक्रिया नपु¥याई राष्ट्रको सम्पदा अरुलाई दिनु भने को बिक्री गर्नु हो  । हो वमजन बौ द्ध तपस् िव हुन् ।
तपस् या गनेर् लाई आफ्नो वन नै किन बनाउनुप¥यो ? पक्की संरचना के को लागि । गौ तम बुद्धले राजकीय सुविधा त्यागे र सन्यासी भएर हि“डे  । उनलाई तपस् या गर्न पक्की संरचना बनाउनु परे न । तर वमजनलाई यी सबै कुरा किन चाहियो ? अहिले सम्म उनको तपस् यावाट के फल प्राप्त भयो समाजलाई ? हिन्दूका पनि धे रै सन्त महन्तहरु छन् । भो लि सबै ले धार्मिक संस् था बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जको वन माग्न थाले के गनेर् ? तसर्थ के पी सरकारले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन फिर्ता गराउन पहिलो निर्णय गर्नुपर्दछ । यसो गरे नन् भने उनी र दे उवामा के ही अन्तर हुने छै न । आशा गरौ ं ओ ली यसबाट बचे र पर्यावरणप्रति जिम्मे वार र जवाफदे ही बन्ने छन् ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत रहे को हलखो रिया वनमा निकुञ्जले धे रै लगानी गरिसके को छ । त्यस क्षे त्रमा अति दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस् थान र चरिचरन स् थलको रुपमा विकास भएको छ । त्यहा“ एकसिङे गै ंडा, बाघ, हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तु रहे का छन् । अब दुर्लव वन्यजन्तु संकटमा त पर्दछन् नै उनीहरु गाउ“समाजमा जान पनि सक्ने अवस् था आउने छ । जसले गर्दा जनधनको ठूलो क्षति व्यहो र्नुपनेर् छ । चितवनको विकास एकसिङे गै ंडा, पाटे बाघ र हात्तीले गर्दा नै भएको हो  । यिनलाई हे र्न दिनह“ु आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको ओ इरो लाग्ने गर्दछ । आज ने पाल आउने विदे शी पर्यटकहरुमध्ये अधिकांश चितवन आउने गर्दछन् । आउने दिनमा पर्यटकको रो जाइ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नहो ला भन्न सकिदै न । २ नं. प्रदे शको आर्थिक स्रो त बन्न सक्छ । २ नं. प्रदे शको समृद्धिमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अहं भूमिका रहन सक्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्रो तविहीन बनाउने षडयन्त्र पनि हुनसक्छ । दे उवाको निर्णय । तसर्थ २ नंं. प्रदे श सरकार पनि यसतर्फ समयमै सचे त हुन जरुरी छ ।
वमजनस“ग जो डिएको धार्मिक संस् थालाई राष्ट्रिय निकुञ्जको वन नै किन बनाउनुप¥यो धार्मिक वन ? यसमा धे रै षड्यन्त्र लुके को छ । पर्यावरणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दे उवा सरकारले किन प्रहार ग¥यो ? चुरे भावर क्षे त्रमा पनेर् उक्त क्षे त्रले चुरे बचाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे को छ । भो लिका दिनमा यही धार्मिक वनलाई आधार बनाएर तस् करीदे खि अपराधको अखडा बनाउन सक्छन् । त्यसै ले समस् त पर्यावरणको क्षे त्रमा क्रियाशील संस् था र व्यक्तिहरु पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बचाउने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । २ नं. प्रदे श सरकारले तत्काल निर्णय गरे र जानुपर्दछ । दे उवा सरकारको निर्णय बदर गराउन २ नंं. प्रदे श तात्नै पर्दछ । निकुञ्जमाथि खे लवाड गनेर् जो सुकै हुन् पर्यावरणका अपराधी हुन् । तिनलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छै न । आज पर्यावरण प्रदूषण र विनाशको कारण मानव जातिमा गम्भीर संकट दे खा परिरहे को छ । यस् तो बे लामा संरक्षणको सशक्त कार्यक्रम बनाउनुको साटो निकुञ्जलाई नै ध्वस् त बनाउन खो ज्ने दे उवा राजनीतिक ने ता हुनै सक्दै नन् ।
अहिले एमाले र माओ वादी के न्द्र स् पष्ट बहुमत भएको के पी सरकार छ । चा“डै यी दुई पार्टी पूर्ण रुपमा एक हुने छन् । अनि एकल पार्टीको पूर्ण वहुमतको सरकार बन्ने छ । जनताले यो सरकारबाट धे रै अपे क्षा राखे का छन् । यसो भन्दै मा वितरणमुखी बजे ट बनाउनु भन्दा हाम्रो विकासमुखी बजे ट बनाउनुपर्दछ । उद्यो गधन्दाको विकास र विस् तारमा जो ड दिनुपर्दछ । यस् तो बे ला पर्यावरणीय पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे र काम गर्नुपर्दछ । सबै भन्दा पहिले सरकारमा बस् ने र पार्टी ने ता कार्यकर्ता इमानदार र पारदर्शी हुन अत्यन्त जरुरी छ । अनि मात्रै कर्मचारी संयन्त्रलाई इमानदार र पारदर्शी बनाउन सकिने छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यबिना विकास र समृद्धिको कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ । कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टी पिच्छे बनाएका संगठनहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । काम गराउने तलव पनि अन्तर्राट्रिय मापदण्ड अनुरुप दिनु पर्दछ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध कठो र बन्नसक्नु पर्दछ । वन र वन्यजन्तु तस् करहरुलाई कठो र कारवाही गर्न सक्नुपर्दछ । विद्युतीकरण गरे र पे ट्रो लियम पदार्थलाई विस् थापित गराउने तिर लाग्नुपर्दछ । यसले प्रदूषण घटाउने छ । प्रदूषित उद्यो गलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । उत्तर को रियाको अग्र्यानिक तरकारीदे खि अन्य कृषिजन्य उत्पादनले अमे रिकाको बजार कब्जा गरे को छ भने हामीले नसक्ने कुरै हु“दै न । यसतर्फ सरकारले सो च्नु पर्दछ । चाहे जे हो स् वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले पर्यावरणमा आधारित दिगो विकास गर्न सक्षम हुने छ भने पर्यावरणवादी र सचे त नागरिकको अपे क्षा पूरा गनेर् छ ।
Previous: दीर्घायु र स्वस्थ जीवन ः शाकाहारी भोजन
Next: महिला मञ्च ः सही समयमा आवश्यक अभियान